जाडो महिनाको बिहानीपख : मह र अदुवाको सेवन, मिल्नेछ नसोचेको लाभ ! « Lokpath
२०७७, ५ मंसिर शुक्रबार ०७:००
जाडो महिनाको बिहानीपख : मह र अदुवाको सेवन, मिल्नेछ नसोचेको लाभ !
प्रकाशित मिति : २०७७, ५ मंसिर शुक्रबार ०७:००
काठमाडौं – जाडोको कहर बढीरहेको छ । कोरोनाको कारण यसपटकको जाडोले अलि धेरै नोक्सानी पुर्‍याउँछ भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कोरोना जोखिमबाट बच्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैमाथि दिनप्रतिदीन थपिएको चिसोले रुघाखोकी लगायतका अन्य समस्या पनि ननिम्त्याउलाभन्न सकिन्न । त्यसैले आज हामी यहाँ मह र अदुवाको सेवनबाट हुने अचुक फाईदाका बारेमा यहाँहरुलाई केहि जानकारी दिँदैछौँ ।
जाडोमा मह र अदुवाको मिश्रण निकै उपयोगी हुन्छ ।
तातोपानीमा अदुवा राखेर केहि मिनेट पकाउनुहोस् । यसमा एक चम्चा मह घोलेर मनतातो अवस्थामा हरेक दिन बिहान पिउनुपर्छ । यसले स्वास्थ्यलाई धेरै राम्रो गर्छ । यसले श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्याहरुलाई पनि सजिलै हटाउँछ । यो मिश्रणले हाम्रो शरीरमा रगतको प्रवाह पनि सन्तुलित बनाउँछ । हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउनुका साथसाथै क्यान्सरजस्तो डरलाग्दो रोगबाट पनि बचाउँछ ।
यतिमात्रै होईन जाडोयाममा खाने चियाको तत्वहरुपनि मिलाउनुपर्दछ । यदी जाडो समयमा तपाईले अदुवा, मरिच र तुलसीको मिश्रणको चिया पिउनुभयो भने स्वास्थ्यमा निकै फाइदा गर्छ । यो चियामा एक सय ग्राम जति शखर हालेर सेवन गरेमा यसले चिसो लागेको, टाउको दुखेको, नाक बन्द भएको, पिनास, श्वास नली बन्द भएको समस्यामा ठीक गर्छ ।
काठमाडौं । हामीले सपनामा केहि न केहि देखेका होलाउँ । सत्य यो पनि
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन तुलसीको पातका गज्जब फाइदा (भिडियोसहित)
काठमाडौं – कोरोनाको महामारीले विश्व आक्रान्त छ । यसविरुद्धको भ्याक्सिन र औषधीको खोजी भइरहेको
को थिए राजा हरिश्चन्द्र, उनले श्रीमती र छोरालाई किन बेचे ?
काठमाडौं । भगवान श्रीरामको वंशमा हरिश्चन्द्र नामका एक राजा थिए । उनी आफ्नो
पूजा गरिसकेपछि किन मागिन्छ माफी ?
काठमाडौं । हिन्दू धर्मावलम्बीहरु हरेकको घरमा पूजा भएको नै होला । पूजा घरमा